धेरै तिनीहरूले जिम जान र यति आफ्नो शारीरिक फारम सबै भन्दा राम्रो अवस्थामा छैन कुनै मौका छ कि गुनासो। त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन्, र तिनीहरूलाई लागि त्यहाँ कसरी घर सुन्दर शरीर प्राप्त गर्न एक तरिका हो। घर मा अभ्यास गर्न सर्वश्रेष्ठ खेल उपकरण मानिन्छ छन् collapsible dumbbells। पुरुष र महिला लागि घर मा अभ्यास फरक छैन। मात्र फरक भएको projectile को वजन छ। धेरै खेल को मूल कुराहरू परिचित छैन भएकोले तिनीहरूले अब छोटकरीमा सामना गर्न हुनेछ कुरा बुझ्न मदत गर्नेछ भन्ने मूल कुराहरू उल्लेखित गरिनेछ।
विभाजित-प्रशिक्षण - यो के हो?
विभाजित - सबै मांसपेशी समूहहरु लागि प्रशिक्षण, प्रत्येक व्यायाम लागि सेट र पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या संख्या, साथै आफ्नो अनुक्रम समावेश एक कार्यक्रम। कार्यक्रम अन्तर्गत, घर अभ्यास लागि सिर्जना, घर मा dumbbells4हप्ता भित्र गर्नुपर्छ संग अभ्यास। सबै आवश्यकताहरु निम्न, एक व्यक्ति समय यस्तो छोटो अवधिमा अधिकतम मांसपेशिहरु वृद्धि गर्न सक्षम हुनेछ।
विभिन्न पेशी समूह प्रयोग गर्न प्रत्येक सत्र भनेर प्रशिक्षण को निर्माण हो। यो दृष्टिकोण को खेलाडी प्रशिक्षण को हप्ताको भर एक उच्च तीव्रता कायम राख्न अनुमति दिन्छ। अधिकतम परिणाम लागि यो प्रत्येक व्यायाम को प्रविधी पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
dumbbells संग अभ्यास को आधार
मानिसहरू लागि dumbbells संग घर अभ्यास मुख्य रूप आधारभूत आन्दोलनहरु समावेश। आधारभूत चलखेललाई जो एक व्यायाम मा मांसपेशी समूहहरु को अधिकतम संख्या उपयोग गर्नेहरू। वजन dumbbells आफ्नै शारीरिक सक्षमता आधारित व्यक्तिगत चयन गर्नुपर्छ।
खेलाडीहरूलाई नवोदित यो जो प्रत्येक58 प्रतिनिधि देखि गरिन आवश्यक मा सिस्टम सेट 2-4 (दृष्टिकोण) पालना गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। प्रत्येक व्यायाम को आयाम जो जिम गरेर हासिल गर्न सकिन्छ भनेर कमसल हुनेछ देखि वजन संग अभ्यास मा सफलता, को प्रविधी निर्भर।
dumbbells संग हतियार लागि अभ्यास
यस खण्डमा पेशी हतियार समूहहरूको लागि घर मा dumbbells मानिसहरूसँग व्यायाम छलफल गरिनेछ। शरीर को यो भाग दुई ठूलो समूह छन् - यो छ को बाइसेप र triceps। मानव हात को सबैभन्दा triceps द्वारा गठन गरिएको छ।
यो व्यायाम सुन्दर हात र शक्तिशाली बाइसेप विकास आकार गर्न प्रमुख छ। आन्दोलन पूर्ण जो सबै भन्दा राम्रो को रूपमा विश्वका सबै खेलाडीहरूलाई द्वारा मान्यता प्राप्त छ फलाम को दंड, एक समान व्यायाम replicates। यो कथन आधारित, हामी यस व्यायाम गर्न मद्दत गर्नेछ भनेर भन्न सकिन्छ।
अझ राम्रो केही तरिका मा डम्बबेलनेबुला मा बारहरू, यो उपकरण को खेलाडी प्रविधि अनुपालनको एक पेशी समूह को विस्तार सुधार हुनेछ भन्ने ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिन्छ देखि संग प्रतिस्थापन खोल। गाह्रो एकै समयमा दुई हात को आन्दोलन नियन्त्रण गर्न पाउन गर्नेहरूका लागि, एक डम्बबेलनेबुला यो व्यायाम vypolnenyat दिनुभयो।
प्रविधी व्यायाम प्रदर्शन चलिरहेको आन्दोलनहरु खडा पारस्परिक रहेको छ। फरक स्थितिमा अनियन्त्रित भएको प्रविधी तोड्न र अस्वीकार्य छ जो हतियार को मांसपेशिहरु, मा लोड कम थियो जो तल्लो फिर्ता, को मांसपेशी समूह जडान गर्न सकिएन भन्ने तथ्यलाई मा निहित। शरीर सार्न एक विराजमान स्थिति धेरै जटिल छ, र यसैले प्रविधिको उल्लङ्घनको बहिष्कृत छ। तपाईं एक वा दुई डम्बबेलनेबुला संग व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै समर्थन मांसपेशीमा हटाइ प्रभावकारी अभ्यास र मात्र पेशी समूह हात काम बनाउँछ। गति अधिकतम दक्षता विभाजित माथिल्लो बाइसेप मा छ। एक वा दुई डम्बबेलनेबुला संग कुनै अन्य व्यायाम यस्तो शक्तिशाली र एकाग्रचित्त प्रभाव दिन छैन।
को triceps विकास
यो आन्दोलन को उद्देश्य - को triceps - सकेसम्म धेरै हात को दोस्रो पेशी समूह विकास गर्न। यो मांसपेशी विभाग, "तीन-लाग्यौं" छ। कार्य हुनत एक कम डिग्री गर्न triceps को लामो टाउको, तर लोड गर्न पडता र अन्य दुई पुग्दा, अधिकतम लोड। व्यायाम उचित प्रविधी कार्यान्वयन मा अधिकतम एकाग्रता लागि डम्बबेलनेबुला संग गरिन्छ। एक विराजमान वा अप स्थितिमा गति कार्यान्वयन सम्भव छ।
यो व्यायाम को मुख्य उद्देश्य -, एक छाप सिर्जना भएको triceps मा लोड विस्तार गर्ने छ। यी अभ्यास पृथक भनिन्छ र यो वृद्धि गर्न भन्दा मांसपेशी समूहहरु को एक गुणात्मक अध्ययन लागि डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। यस कारण, यी अभ्यास कडा अन्तिम प्रदर्शन गर्न सिफारिस गरिएको हो।
को काँध लागि अभ्यास
को deltoid मांसपेशी विकास यस व्यायाम गरिरहेको उद्देश्य छ, काँध IE। साथै triceps रूपमा, deltoid पेशी triceps छ। dumbbells बैठक को प्रेस को deltoid मांसपेशी समूहहरु को बीचमा खण्ड मा लोड maximizes। तर, लोड को आफ्नो भाग डेल्टा दुवै अगाडि र पछाडिको भागमा हुनेछ। अनुभव प्रशिक्षक को खडा कटि क्षेत्र ठूलो दबाब उजागर हुनेछ हुँदा, एक बसिरहेका स्थिति मा एक आन्दोलन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
यो प्रविधी प्रयोग गरेर deltoid, बाइसेप, प्लस ट्रयापिज सबै तीन टाउको प्रयोग र कम हदसम्म गर्न खेलाडी अनुमति दिन्छ। निस्सन्देह, यो व्यायाम लागि ढिक्का खेलाडी थप वजन उचाल्न अनुमति दिन्छ, तर dumbbells सम्पूर्ण projectile रिकभरी प्रक्रिया को राम्रो नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रमुख अभ्यास को एक र मानव स्तन मांसपेशी विकास लागि चिरपरिचित। आधारभूत आन्दोलनहरु मा प्रयोग dumbbells को खेलाडी राम्रो प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न, र पोल भन्दा ठूलो वजन संग आन्दोलनहरु को आयाम भएकोले pectoral मांसपेशीमा को गहिराई अध्ययन सुधार गर्न अनुमति दिन्छ। तेर्सो पट्टी मा पीठ मा अधिकतम लोड गर्ने पेशी समूह को बीचमा भाग पर्छ।
को ढलान मा projectile thrust
पछाडि को मांसपेशी समूह समावेश गर्ने व्यायाम। लोड को सबै भन्दा जब latissimus व्यक्ति प्राप्त प्रदर्शन। यस पीठ प्रेस जस्तै, र deadlift डम्बबेलनेबुला व्यायाम आयाम गर्दा भन्दा बढी पूर्ण हुनेछ फलामको डण्डाले यस्तै गति।
यो आन्दोलन धेरै सरल र धेरै प्रभावकारी हुन्छ। को त्रपेजियस पेशी समूह मा लोड Maximizes। यो dumbbells संग व्यायाम को पनि आयाम पर्याप्त छैन भनेर याद गर्न लायक छ। यो जडान मा, 1-2 सेकेन्डको लागि माथि ढिलाइ अनुभव खेलाडीहरूलाई हात सिफारिस गरिएको।
मांसपेशी कसरी सुक्खामा?
मानिसहरू कम उपयोगी छैन लागि अदुवा
प्रयोग, सङ्केत गर्छ र प्रतिक्रियाको लागि निर्देशन। "Normoven" - के दबाइ?
Sealife Buket Beach Hotel5* (टर्की / अलेल्या): समीक्षा र फोटो
ऊर्जा र प्लाज्मा हतियार। हतियार विकास गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको